किन थन्किए गोरखा बजारका सिसि क्यामेरा ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
किन थन्किए गोरखा बजारका सिसि क्यामेरा ?
Published On : ७ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०७:४४
साँढे २ वर्ष अघि जिल्ला सदरमुकाममा सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै बजारमा सिसि क्यामेरा जोडियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा तत्कालीन जिविस, नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल संघ, कपडा तथा फेन्सी ब्यबसायी, सुनचाँदी ब्यबसायी, ब्याङकर्स एशोसिएशन, यातायात ब्याबसायी समिति, निर्माण ब्यबसायी, र टोल बिकास संस्थाहरुको सहकार्यमा क्यामेरा राखिएको थियो । त्यो बेला बजारमा राखिएका सात वटै सिसि क्यामेराले अहिले काम गर्दैनन् ।
‘पुरानो पनि भएर होला त्यो बेला राखेका सिसि क्यामेराले अहिले काम गर्दैनन्’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भेषराज रिजालले भने ‘सात वटा सिसि क्यामेरा थियो । अहिले कोही फाइबर नै विग्रेर चलेनन् कोही क्यामेरा विग्रेर चलेनन् ।’ बजारमा रातीको समयमा चोरी डकैती बढेपछि तत्कालीन डिएसपी रमेश थापाको कार्यकालमा सर्भे गरी डिएसपी बसन्त रजौरेको पालामा जडान भएका क्यामेराहरु अहिले बेकम्मा भएर थन्केका प्रहरीले जनाएको छ ।
क्यामेरा जडान गर्न २० लाख रुपैँया लागत लागेको थियो । क्यामेराले काम नगर्ने थाहा पाएका हरमटारीका एक ब्यापारीले भने सम्बन्धीत निकायको हेलचक्राइँले बन्द भएको बताए ।
‘सदरमुकामको मुख्य चोकमा राती बस्न छोडेको धेरै भयो’ उनले भने ‘कसैको घर फोडियो भने, चोरी भयो भने सिसि क्यामेराले त पत्ता लगाउँछ भन्ने मनमा हुन्थ्यो अहिले त त्यो पनि बन्द भएछ । बसपार्क तिर राती १० बजे तिर बसपार्क तिर जाने हो भने प्रहरी भेटिन्न ।
सदरमुकाम हो केही हुन्न भनेर ढुक्क हुने स्थिती छैन ।’ बसपार्क, बैंकरोड, शक्तिचोक, जिबिस चोक, प्रशासन कार्यालय क्षेत्र, आरुघाट बसपार्क, हरमटारीचोक, चाइनिज धारा र ठूलोआँगन क्षेत्रको सीसी क्यामराले काम गर्न छोडेको हो । सीसी टीभीको कन्टूोल रुम भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थियो ।
क्यामेराले काम गर्न छोडेको महिनौ पछि पुन जडान गर्न भनेर लागिएको छ । ‘यो महिना भित्र बजारमा पुन सिसि क्यामेरा जोडिन्छ’ डिएसपी रिजालले भने ‘सामुदायिक सेवा केन्द्रसँग सहकार्य गरेर नयाँ क्यामेरा राख्न लाग्या हो । पहिलेको बेलैमा बनाउन सकिएन । अहिले बनाउँदा लाग्ने खर्चले नयाँ आउने रहेछ ।’